WhatsApp wuxuu tijaabinayaa habab cusub oo dhakhso loogu heli karo istiikarada | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | 06/05/2021 23:59 | Barnaamijyada IPhone, Noticias
Adeegyada farriinta ayaa noqday kuwa maalinteenna maanta. Halka telegraam wuxuu sii wadaa inuu ku fuulo caan ka mid ah shaqooyinkiisa iyada oo si dhakhso leh loo bilaabayo wicitaanadeeda fiidiyowga ee qaabka ugu caansan ee xirfadeed, WhatsApp wuxuu sii wadaa inuu ku horumariyo shaqooyinkiisa betas. Waana in betasyada noocyada cusub ee WhatsApp ay muujinayaan shaqooyin badan oo laga yaabo in mustaqbalka la arki doono, in kasta oo ay run tahay in qaar badan oo ka mid ah ay ku sii harsan yihiin dhinaca. Beta-kii ugu dambeeyay waan arki karnaa talooyinka istiikarada, qaab ah si dhakhso leh u hel istiikarada ay tahay in eray lagu sameeyo, sida macruufka macruufka ah ee ereyada emojis ku leh kumbuyuutarka
WhatsApp waxay ku codsan kartaa istiikarada ereyo
Hawsha waa la baabtiisay talooyinka istiikarka ah labadaba gudaha iyo bogga loogu talagalay falanqaynta betaskan WABetaInfo. Xaaladda hadda jirta ee shaqadu waa inay ku socoto horumar waxayna gaari doontaa labada iOS iyo Android sida lagu arki karo koodhka noocyada kala duwan ee nidaamyada hawlgalka ee su'aasha laga qabo.
Soo-jeedimaha istiikeriga ah waxay u shaqeeyaan si la mid ah sida isbarbardhiga emojis iyo ereyada uga shaqeeyaan kumbuyuutarka kumbuyuutarka. Istiikaarada waxay ku dhex leeyihiin metadata gudaha taas oo ogolaaneysa in ereyo lalaxiriiriyo. Habka ugu fudud ee lagu fahmi karo waa tusaale. Qiyaas inaan haysanno istiikirro ku wareegaya dareenka "murugo." Xilliga aan qoreyno ereyga "murugo", astaanta calaamadaha istiikarada ee ku yaal dhinaca midig ayaa is beddelaysa si aan toos ugu heli karno istiikarada la xiriira erayga aan qornay, xaaladdan "murugo" oo kaliya kuwa ku habboon raadinta ayaa la soo bandhigi doonaa.
Waxaan ku hubin karnaa hawlgalkeeda si kooban fiidiyow ka sarreeya khadadkan. Si kastaba ha noqotee waxaa jira xaddidaad: Waqtigan xaadirka ah istiikarada dhinac saddexaad kuma shaqeeyaan qalabkan. Taasi waa, dhammaan kuwa aan ka abuurno meel ka baxsan nidaamka deegaanka ee WhatsApp kuma habboonaan shaqadan, ugu yaraan gudaha beta aan ka hadlayno. Si kastaba ha noqotee, ilaha gudaha ee barnaamijka ayaa xaqiijinaya inay shaqeynayaan si ay u awoodaan inay dhexgalaan sida ugu dhakhsaha badan ee macruufka iyo Android iyo xitaa inay awoodaan inay iswaafajiyaan, mar dambe, emojis leh istiikiiro, iyagoo qaadaya tallaabo dheeraad ah habkan wadaagista nuxurka wadahadalkayaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » WhatsApp wuxuu tijaabiyaa habab cusub oo si dhakhso leh loogu helo istiikarada